PIED: သင်ဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်လို့မရနိုင်လဲ (German) - Your Brain On Porn
PIED: အဘယ်ကြောင့် (ဂျာမန်) သင်တို့အဘို့ဤမျှကျန်းမာမဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး porn စောင့်ကြည့်
(မှတ်ချက်: ဒီဂျာမန်ဆောင်းပါးတစ်ခုက Google tranlate ဖြစ်ပါတယ်)
Mick ဗန် Loon, မျောက်သတင်းအယ်ဒီတာ, 9-25-14
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဓိကအားဖြင့်ပြaနာတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အသက် ၄၀ ကျော်သူများမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။ နပန်းသမားများနှင့်ပြိုင်နေသောအမျိုးသားလေး ဦး တွင်တစ် ဦး သည်ငယ်ရွယ်သည်။ ထို့အပြင် - အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်ကြားလိင်တက်ကြွသောယောက်ျားလေး ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ ပြissueနာ” ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ အဆိုပါအကြောင်းရင်း PIED သို့မဟုတ် Porn သွေးဆောင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅၄ ရာနှုန်းသောထက်ဝက်မှာသူနှင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလျှင်သူမအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယခုနှစ်စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အထူးကုဆရာဝန်များအားခဏတာခန့်အပ်ပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်အတည်ပြုပြီးသောလူငယ်များသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုခံစားရသည်။
၄ နှစ်တာအတွက်ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုလေ့လာခြင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်နှစ်ရပ်ရှိသည် - ပုဝါကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် - အတူတူပင်ရှိနေသေးသည်။ တစ်ဖက်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အခြားဆေးပြားများနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကျယ်ပြန့်စွာရှုမြင်ရမည်။ ယခင်လူငယ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသုံးခဲ့ကြဟုပြောခြင်းသည်အရူးအမူးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကသာအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအသုံးပြုသည်။ MDMA အထူးသဖြင့်ကိုကင်းသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်သင့်လိင်ဘ ၀ အတွက်ပြသရန်အချိန်ကြာသည်။ သို့သော်အငယ်ဆုံးမျိုးဆက်စိတ်ကျဆေးများအပါအ ၀ င်ဆေးညွန်းဆေးများသည်လည်းအကျိုးရှိသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆရာဝန်များရှင်းပြသည့်ဒုတိယ link သည် porn ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုခြင်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလေ့လာခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ ဦး နှောက်နှင့်အဘယ်သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတိုင်းတာသည်နှင့်၎င်းသည်သင့်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
အဓိကတွေ့ရှိချက်သုံးခုရှိပါသည်။ ပထမ ဦး စွာသင် porn ကြည့်နေသည့်အချိန်နှင့်အရာ၏လုပ်ဆောင်ချက်တို့အကြားဆက်စပ်မှုအမှန်ရှိသည် ဆုလာဘ် circuitry သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာပူနှင့် dopamine သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြန့်ချိသည်။
နှစ်။ ယောက်ျားတွေက porn ကိုများများကြည့်လေလေ dopamine နည်းလေလေဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားမှာမက်လုံးတွေပိုများလာတယ်။
သုံး: တစ်ဦးအနေဖြင့်ပြီးနောက်, ဒီပင်ကသင်၏ prefrontal cortex နဲ့ ventral tegmental ဧရိယာအကြားတစ်ဦးလျှော့ link ကိုပေးနိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ် VTA သင် (dopamine လက်တွေ့တွင်ထုတ်လုပ်သည်အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းကိုသင့်ရဲ့ Impulses သတင်းပို့ကျော်တစ်ဦးလျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုကိုဆိုလိုသည် ..
အရက်သေစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဆိုပါက porn သည်လုပ်ပုံရသည်။ သင့် ဦး နှောက်နှင့်ဆင်တူသည် ဦး နှောက်လေ့လာမှု ၆၀ ခန့်မှကြည့်လျှင်ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြောင်းပြန်လှန်သွားကြောင်းပြသသည်။
တစ်နည်းပြောရရင် PIED (သို့) porn သွေးဆောင်မှုအတည်ပြုချက်ဆိုတာသိပ္ပံနည်းကျလုံလောက်ပါတယ်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလက်တွေ့တွင်ယောက်ျားများသည် porn ကိုပိုမိုကြည့်ရှုလေလေ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြည့်နေတာလဲ၊ porn မပါဘဲစိုက်ထူဖို့ပိုခက်လေပဲ။
ယောက်ျားများသည်အချိန် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျန်ရှိနေသည့်အင်တာနက်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရှုရန်လွန်စွာလွန်စွာလွန်စွာအသုံးဝင်သည် (လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က ၃၅% မှကြည့်လျှင်) သည်အခြား porn channel များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အပိုဆောင်းမက်လုံးများထို့ကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ၎င်းသည် ပို၍ ပင်စွဲလမ်းစေသည်။
အဆိုပါရလဒ်သူတို့လိင်မပါဘဲ၎င်းတို့၏လက်ပ်တော့များလာသောအခါ ပို. ပို. လူပျိုတို့အခက်အခဲရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းရင်းမြစ်များပါဝင်သည်: ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated (ဆီမှKühn, Jürgen Gallinat, လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ Max Planck အင်စတီကျု) နှင့် အသစ်စက်စက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာလေး ဦး တွင်တစ် ဦး မှာလူငယ်လူရွယ်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းမှစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရုပ်ပုံဖြစ်သည်။(Capo Grosso, Colicchie & co, Urology ဌာန၊ တက္ကသိုလ် Vita-Salute San Raffaele)